နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Movie Review : You Are In So Far Away Nation (Korean Movie)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:48 PM
khin oo may January 11, 2009 at 11:54 PM
Innocent ..(စာလုံးမပေါင်းတတ်ဘူးလို့ထင်လို့.ပေါင်းပြသွားတယ်။ )
၁၉၇၀ က စကဒ်က တိုလှချည်လား။ ဒါကတော့ အမြဲတိုပါတယ်လေ. နှစ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။
ဆင်ဆာက ကိုဘဖြတ်တာလား။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကော ဖြတ်သလား။
ကြွေနွမ်းတယ်ဆိုတော့မင်းသမီးသေတယ်ထင်တယ်။ အဲဒီအခွေ ကို မငှားဘူးနော်။ ကြိုပြောထားတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ သွားကြည့်ပြီးပါပြီ. ခိုင်းတာတွေ အားလုံးလုပ်ြီ့ပီးပါပြီ.။
Ko Boyz January 12, 2009 at 12:02 AM
သိချင် ဝယ်ဖတ်... နှစ်ကျပ်ထဲ...။
ksanchaung January 12, 2009 at 1:00 PM
Talkie ကတော့ Dolby ပဲ။ ဧ၀ရက်တို့၊ စိုးသိဏ်းတို့တောင် ထိုင်ငိုလောက်တယ်။ သိုးဆောင်းကားလေးတွေလည်း ဝေဖန်ဦးပေါ့ကွာ။ ကိုရီးယားကျတော့ တို့က အလှမ်းဝေးတယ်။